Nanao fanakanana ny fampanoavana amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany any an-toerana, saingy tsy afa-nanoatra. Ny androtr’io ihany dia efa niala tao Toamasina an’Antananarivo ny tenany, raha ny fampitam-baovao. Nizarany ny hafaliany io fahafahany io ireo namany, ary koa ny nampahafantarany fa « tsy nisy nanampo ny nialany » tao am-ponja ny maro. Marihina fa voarohirohy ho niketrika ny fakana an-keriny ilay teratany karana Arman Kamis ny tenany ny volana novambra 2018, ary voasambotra tany Antsirabe ny volana desambra 2018. Niisa 8 ireo niara-voasambotra taminy. Nilaza ny tsy hanaiky lembenana amin’ny mety ho fanavotana sy fampanoavana tao Toamasina ny volana desambra 2018. Mahagaga fa tsy mbola notsaraina ity raharaha ity no izao nomena fahafahana vonjimaika izao ilay voalaza fa atidohan’io fakana an-keriny io. Kandida depiote mpisolo toerana amin’ny lisitra tsy miankina iray mirotsaka ao amin’ny distrikan’Ifanadiana i Manantena Hajanirina Dina, amin’ny fifidianana solombavambahoaka hatao amin’ny 27 mey 2019. Mampiahiahy ny nahazoany fahafahana vonjimaika izay mety efa ela izany, fa natao nangingina matoa afaka nikarakara ny antontan-taratasy firotsahan-kofidiany izy. Toa manamarina izany rahateo ny vaovao nivoaka vao andro vitsy izay momba ny fisamborana azy indray, saingy io nomena fahafahana io. Misy amin’ireo dosie misy 14 karazany rahateo tsy maintsy fenoin'ny mpilatsaka ho fidiana, ka tsy maintsy eo imason’ny tompony no atao ny fanamarinana azy. Tany aloha dia ny Vondrona MAPAR no nahalalana azy, ka asa na misy hifandraisany amin’izany izao fanafahana azy izao na tsia.